Shacabka Media | Maxaa sababay amni-xumadda soo rogaal-celisay ee Koonfurta Soomaaliya ka taagan?
Maxaa sababay amni-xumadda soo rogaal-celisay ee Koonfurta Soomaaliya ka taagan?
Marxaladdan ayaa ah in bishan aan weli kala barka gaarin ay iska hor imaadyada u dhaxeeya Alshabaab iyo dhinacyadaas ay kor u kaceen, weerarrada is qarxinta ah oo kaliya ay galaafteen nolosha 55 qof. Waxaa intaa ka badan dadka ku dhaawacmay oo 70 kor u dhaafaya.
Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah waxyaabaha lagu micneeyay weerarrada Alshabaab ee kordhay ayaa ah in kooxdan ay ka faa'iideysanayso qalalaasaha siyaasadeed ee dowladda hadda ku furan, kaas oo ka mashquuliyay hawlo badan oo amni oo ay wax ka qaban lahayd.
Sidaasi oo ay tahay wali madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu xiranyahay direyska ciidammada, labo maalin ka hor ayuuna ka soo muuqday xero ciidammadu ku tabobartaan, wuxuuna muujiyay sida ay uga go'antahay in uu ciidammada dhiso
Muuqaal(Sh-Media)Oromadda Itoobiya oo xasuuqday 32-Soomali ah iyo Qaad la*aan ka taagan Somaliland
Baarlamaanka oo guddi u saaray arinta Halgamaa Qalbidhagax iyo 65-Xildhibaan oo durba is-qoray